काठमाडौ । विबाहमा बेहुली रुँदै विदाई भएको देखिन्छ । तर भारतकी स्नेहा सिंघी नाम गरेकी युवतीको आँट र साहासलाई भने मान्नै पर्छ । उनले सिंगो विबाहमा निर्धक्कसाथ समय बिताएर बेहुलाको घर फर्किने बेला आँफैले गाडी
रातीको २ बजे भब्य घर भित्र पसेर चोर एक्कासी घरमालिककी छोरीको कोठामा पुग्यो, त्यसपछि...
एजेन्सी । चोरहरु संसारभर हुन्छन् । जसले केही काम नै नगरी लखर लखर डुलेर आँखा छलेर आफ्नो गुजारा चलाउन पाइरहेको ब्यक्तिले किन गरोस् दुख ? किन लिओस् अरु तनाव ? आज हामी यस्तै एक ब्यक्तिको
नेपालमा भेटियो यति महंगो साइकल : लाखाँको साइकल देखेपछि सबै छक्क, हेर्नुहोस् भिडियो
नेपालमा साइकल चढ्न पर्छ भन्ने जनमत बढ्दै गइरहेको छ । आफ्नो स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नको साथै वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणको लागि पनि जानकारहरुले साइकलको प्रयोग गर्न सुझाउँदै आएका छन् । त्यसोत नेपाल आफैँमा साइकलका पारखीको लागि पनि महत्वपुर्ण
हरिणको सिंगमा माकुराको जालो भरिएपछि
बिरामी भएपछि यो कुकुरले आँफै डाक्टरकहाँ गएर आफ्नो उपचार मागेपछि
एजेन्सी । कुकुर निकै बुद्धिजिवि प्राणी हो । कुकुरले मानिसले नगरेका चामत्कारिक काम गरेका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । यसैबिच हालै एक कुकुरले बिरामी भएपछि आफैँ चिकित्सक कहाँ गएर उपचार गरेको खबरले सबै दंग परेका छन्
नेपालीले राम्रोसंग नचिनेको तर नेपालमा नै पाइने यि कैयौँ रोगहरुको औषधी बारे जान्नुहोस्
काठमाडौँ । कुरिलोका बोरेमा तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएका छ ? काँडासहितको काण्ड र मसिना झुप्पादार पात हुने कुरिलोका टुसालाई विशेषगरी तरकारीको रूपमा बढी प्रयोग गरिन्छ । जरालाई भने विभिन्न रोगको अचुक औ षधिका रूपमा प्रयोगमा